Tetezan’Iombifotsy - Arivonimamo : Olona efatra matin’ny lozam-piarakodia -
AccueilRaharaham-pirenenaTetezan’Iombifotsy – Arivonimamo : Olona efatra matin’ny lozam-piarakodia
Ramatoa iray sy tovovavy 14 taona ary lehilahy roa izay nahitana ny mpamily no maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’iny lalam-pirenena voalohany iny, izay nateraky ny Car an-dalana mampitohy an’i Manalalondo, omaly tokony ho tamin’ny 09 ora maraina. Teo amin’ny tetezan’i Iombifotsy Andranomena, kaomina Imerintsiatosika, distrikan’Arivonimamo faritr’ Itasy, toerana 30 kilometatra miala an’Antananarivo no nitrangan’ity loza mahatsiravina ity. Ankoatra ireo namoy ny ainy, dia mpandeha miisa 58 ihany koa no naratra, izay nahitana ankizy 08 ka ny 09 tamin’izy ireo no tena voa mafy. Efa nisy nalefa nody io omaly io ihany ireo marary sasany, vantany vao nahazo ny fitsaboana sahaza azy ny tsirairay avy, raha toa ka mbola arahi-maso eny amin’ny hopitalin’ Arivonimamo sy Hjra Ampefiloha kosa ireo ambiny. Araka ny loharanom-baovao, dia niala omby nandeha teny amin’ny arabe ity fiara taksiborosy ity no tsy tafajanon’ny mpamily intsony ka tafavoaka ny lalana sy nilatsaka tany ambany tetezana. “Nandeha mafy ilay fiara ary rehefa nipoitra tampoka hiazo ilay tetezana dia taitra ny mpamily raha nahita ireo omby noroahina teo amin’ny arabe. Niezaka niala izany any any amin’ny ankavia izy saingy tsy voafehiny intsony ny familiana sy ny hafainganam-pandeha ka tafavoaka ny lalana, ary latsaka tany ambany tetezana tany amin’ny 20 metatra ambany”,hoy ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena.
Ireo olona teny an-toerana moa no nampandre ireo zandary avy hatrany vantany vao naheno sy nahita ny fidobok’ity fiara latsaka tanaty rano ity. Vetivety foana dia nigadona teo amin’io tetezana io ireo mpitandro filaminana miasa tsy lavitry ny toerana nisehoan’ny voina, niaraka tamin’ireo zandary avy ao amin’ny borigadin’Arivonimamo. Ankoatra ny famoahana ireo olona rehetra tao anatin’io car an-dalana io, dia nanakana ireo fiara rehetra nandalo tany amin’iny lalana iny ihany koa ireo manam-pahefana mba hamonjy sy hitondra ireo marary tany amin’ny hopitaly. Ny 43 tamin’ireo naratra, izay nahitana mpandeha miisa 09 tena voa mafy no nalefa teny amin’ny hopitaly Hjra Ampefiloha. Nentina teny amin’ny hopitalin’Arivonimamo kosa ireo 15 ambiny. Marihina fa zazakely vao 10 volana monja, izay navotana tovovavy tsara sitrapo ny iray tamin’ireo olona notsabiana teny amin’ny hopitaly Hjra. Tonga nijery ireo niharan-doza teny amin’ity hopitalim-panjakana ity moa ny solontenan’ny governemanta io omaly antoandro io, ary noraisin’ny fitondram-panjakana an-tanana ihany koa ny fikarakarana sy ny fitsaboana ireo maratra rehetra.
Fanindroany tamin’ny lozam-pifamoivoizana nateraky ny fiara car an-dalana izay nahafatesana mpandeha, nitranga tamin’ity taona ity iny loza niseho tany amin’ny RN1 omaly iny.Tamin’ny faha-09 ny volana mey lasa teo kosa ny tranga voalohany tany amin’ny RN4, tany amin’ny kaomina Andriba izay namoizana ain’olona miisa dimy, rehefa navadik’io fiarakodia io ihany noho ny olana teo amin’ny hisatra. Ankoatra ny faharatsian’ny lalana sy ny tsy fahatomombanan’ny fiara, dia isan’ny mahatonga ny loza eo amin’ity karazana fiara fitateram-bahoaka iray ity matetika ny tsy fanajan’ny mpamily ny fenitra tokony harahina eo amin’ny lafin’ny fitondrana entana ka isan’ny mahatonga ny loza. Mba tsy hiverenan’ny loza tahaka ireny intsony, izay tsy maintsy hahitana tranga foana isan-taona, dia tokony hisy ny fepetra hentitra horaisina amin’ny alalan’ny fanafoanana tanteraka ny fampiasana ity fiara taksiborosy izay efa hita mibaribary fa mitera-doza ho an’ireo mpandeha ity. Tokony hohamafisina ihany koa ny fanaraha-maso ireo fiara fitateram-bahoaka tsy an-kanavaka mampitohy ireo lalam-pirenena rehetra, mba hisorohana amin’ny tranga mamoa-tsampona.